Kpọtụrụ Anyị - Pụrụ Ịchọta
Soro Brenda aka
Ọ na-atọ m ụtọ ịnụ mgbe ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ákwà nụrụ. Biko kpọtụrụ anyị na Pụrụ Iche "Chọta ..." site n'ịkpọ anyị ma ọ bụ, mezue ụdị dị n'okpuru ebe a iji zipụ ozi. Anyị ga-alaghachikwute gị n'oge na-adịghị anya!
Lelee ihe kwesiri ihe di n'okpuru:*
Achọrọ m ozi ndị ọzọ banyere ihe onwunwe pụrụ iche.
Enwere m ihe pụrụ iche m ga - achọ ire.
Abụ m Onye Ọrụ & Enwere m ihe pụrụ iche iji kpọsaanụ.
Ọ bụrụ na ị na-ere, biko nye Adreesị OR OZI OR Mba nke Ngwongwo
Tinye ihe obula: